Metropolis News: benefits of green tea with lemon for skin
benefits of green tea with lemon for skin Waxaa laga yaabaa inaad ka barteen faa'iidooyinka kala duwan ee shaah cagaar , oo ay ku jiraan faa'iidooyinka shaaha cagaaran for maqaarka . Green shaaha waxaa loo isticmaali karaa daaweynta finan . Intaa waxaa dheer , waxaa kale oo faa'iido leh si aad maqaarkaaga u eeg dhalaal iyo hufan . Kuwa soo socda waa hababka kala duwan oo aad samayn karto si aad u isticmaalaan shaah cagaar ah ee aad maqaarka .
Shaaha Green sida maaskaro
Ma aha in aad si ay ugu iibsadaan maaskaro qaali ah dukaanka ; halkii , waxaad samayn kartaa in aad maaskaro gaar ah oo isticmaalaya shaaha cagaaran . Waxaad ka heli kartaa faa'iidooyinka shaaha cagaaran for maqaarka haddii aad sameyn waxyaabaha soo socda .
Ka dib marka aad hore u koob shaah ah oo cagaaran cabto , bac shaaha baxay .
Markaas ka gooyay boorso shaaha oo furan .
Ku rid ka kooban ku galay koob yar .
Ka dibna ku dar in yar oo malab koobkii .
Waxaa walaaq si tartiib ah oo ka dhigi galay , Jinka ah .
Markaas ka dalban kartaa wajiga .
Ka hor inta aadan codsan in aad wajiga , aad leedahay si aad u hubiso in aad wajiga waa nadiif ah . Daa oo ku saabsan toban daqiiqo . Markaas , waxaa mayr biyo cusub .
Green kooban iyo Fast Shaaha wajiga
Tani waa adiga kugu haboon oo u baahan inaad meel aado iyo eegi fiican laakiin aanad haysan waqti badan for wajiga for . Waxaad ka heli kartaa faa'iidooyinka shaaha cagaaran for maqaarka haddii aadan soo socda habka :
Qaado hal bac shaaha .
Orod boorso shaaha biyaha weyn u kulul oo waa ku filan si ay u uumi bixiya .
Markaas , tuuji biyaha , laakiin ka baxaan qaar ka mid ah .
Xoq boorso shaaha oo dhan wejigaan kuu saari waayo , mid ama laba daqiiqo .
Waxa kale oo aad noqonto karaa ilaa boorso shaaha ayaa qaboojiyey off ama ma yahay uumi bixiya haysanno .
Ka dib markaan habkan codsatay , aad ayaad arki doontaan cusub oo fiican uga tagaa .
Shaaha Green sida Caanaha nadiifiye
Waxaad subax walba dalban kartaa shaah cagaar si aad u fool ah ay la socdaan nadiifiye ay wajiga aad caadi ahaan u isticmaasho . Halkan waa habka :
Qaado hal bac shaaha markaasay googooyeen oo u furan .
Faaruqi ka kooban ku galay koob yar .
Qaado nadiifiye wajiga .
Qaadada ku saabsan 2 qaado .
Waxaa Koobka ku iyo walaaq wada jir ah ula qaadada .
Natiijada waxay tahay in la cream cad oo qaro weyn leh barabaro oo qoyan ee .
Markaasaa waxaa u codsato in aad wajiga .
Daa oo ku saabsan shan daqiiqo ka dibna biyo raaci off .
Waxaad imaan doontaa dugsiga ama xafiiska leh weji more iftiimay , gaar ahaan haddii aad si joogto ah u sameeyaan . Tani waa mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu wanaagsan ee shaah cagaar ah ee maqaarka .